MediaLight Mk2 Dimmable A19 Bulb - Nalalka MediaLight Eex
Bogga ugu weyn MediaLight Mk2 Dimmable A19 Bulb
wax soo saarka.waydayaasha.hoose_variant Hal / E26 / 110v - $ 29.95 Hal / E27 / 220v - $ 29.95 6-Xidhmo / E26 / 110v - $ 179.95 6-Xidhmo / E27 / 220v - $ 184.95 12-Xidhmo / E26 / 110v - $ 299.00 12-Xidhmo / E27 / 220v - $ 309.95
Single 6-Xidhmo 12-Xidhmo Pack
E26 / 110v E27 / 220v danab
Guluubka MediaLight waxaa loogu talagalay inuu u hoggaansamo SMPTE Heerka ST 2080-3: 2017 'Tixraaca Muuqaalka Deegaanka ee Qiimaynta Sawirada HDTV.'
Soo bandhigida heer-kul heer sare ah ee CRI iyo mid heer sare ah oo heer sare ah oo heer sare ah oo midabkeedu yahay 'Colorgrade Mk65 chip' oo laga soo qaaday Shaybaarka Muuqaalka. mishiinka yareyn kara ee MediaLight Mk2 wuxuu kuu soo bandhigayaa saxnaan aan la isku haleyn karin oo ku saabsan tiyaatarka gurigaaga waana ku darista saxda ah ee buundadaada qiimeynta.
Loo habeeyay Lutron dimmers *
3 Warqad Xaddidan Xaddidan
120 ° xagasha beam
Tani ma aha nal caadi ah. Uma isticmaalo il iftiin COB jaban. Waxay ka kooban tahay 32 shakhsiyadood oo midabbada loo yaqaan 'Colorgrade Mk2' ah (in ka badan 1m MediaLight Mk2 Eclipse, laakiin leh awood qaybsi isku mid ah) iyo, si ka duwan nalalka COB, uma baahna illaa 15 daqiiqo si loo gaaro heerkulka midabka bartilmaameedka ah. Tani waa waxa aan uga jeedno kuleylka degdega ah.
Guluubka 'MediaLight Bulb' waxaa loo dhisay si ka duwan sida nalallada badankood waxaana laga yaabaa inuu si ka duwan sidii hore ula shaqeeyo mishiinkaaga jira. It waxaa loogu talagalay Lutron LED dimmers maxaa yeelay waxay bixiyaan qalab beddelaad gooya oo u oggolaanaya in si buuxda oo sax ah loo xakameeyo xajmiga xajmiga. Warka fiicani waa in Lutron dimmers ay yihiin kuwo qiimahoodu macquul yahay. Xaaladaha badankood, dimmer-yada kale way fiicnaan doonaan, laakiin waxaad ogaan kartaa arrimaha soo socda:
Qaddarka yar ee xajmiga xajmiga (Caadi ahaan 70-90% baaxad ahaan iyo 100% oo leh dab shidan). Ma noqon karto mid hoose ama mid sareeya.
Nalalka LED-ka lagama xiri karo marka ugu hooseysa: taas waxaa sababa dimmerka oo ka fikiraya in guluubka gabi ahaanba la xiray sababo la xiriira qadar yar oo watta ah oo uu isticmaalayo LED-ka.
Nidaamyada yareynta ee ku saleysan tiknoolajiyada xakamaynta X10 ama Power Line Carrier (PLC), LED-yada ayaa laga yaabaa inay dhalaalaan marka ay qaybaha isgaarsiinta wada xiriiraan sababo la xiriira isbeddellada yaryar ee awoodda khadka.
Waxaa lagugula talinayaa inaad tijaabiso cabbirkaaga hadda si aad u ogaato inay ku shaqeynayaan nalalka MediaLight ee aad soo iibsatay. Fursadaha ayaa ah inay si fiican u shaqeyn doonaan. Haddii kale, dhibaatada waxaa lagu xallin doonaa iyadoo la iibsanayo cabir hoos ku qoran:
Sidoo kale mid ka mid ah Lutron Caseta dimmers. Ilaa iyo inta uu jiro goos goos-hoose ah, wuu shaqeyn doonaa xasillooni la'aan ama deg-deg deg-deg ah oo loogu talagalay goobaha hoose.